केकी अधिकारीले गरिन् चुपचाप् बिवाह, को हुन् दुलाहा ? — Imandarmedia.com
केकी अधिकारीले गरिन् चुपचाप् बिवाह, को हुन् दुलाहा ?
काठमाडौं। अभिनेत्री केकी अधिकारीले बुधवार गुपचुप विवाह गरेको चर्चा फिल्म क्षेत्रमा भुसको आगो झैँ फैलिरहेको छ। आफू निकट सबैलाई गुपचुप विवाह गर्ने कुरा गर्दै आएकी उनी भव्य विवाहमा रुचि नभएको बताउँथिन्।
उनका निकटतम सहकर्मीलाई समेत विवाह हो कि होइन भन्ने बारे पूर्णरुपमा जानकारी छैन। तर विवाहको हल्ला उनीहरूले पनि सुनेका छन्। केहीले भने उनको विवाह नभएर इन्गेजमेन्ट भएको सुनेको बताउँछन्।
केकी नजिक रहेकी बेनिशा हमाल भन्छिन्, ‘मैले पनि हल्ला सुनेँ। मलाई पनि धेरै जनाले फोन गरेर सोधी सक्नुभयो। तर मलाई नै निम्तो भएन। र अफेयर कहिल्यै बाहिर नआएकी केकी प्रेम र विवाहजस्ता कुराहरू सेलिब्रेटीको ‘प्राइभेसी’ भित्र पर्ने धारण राख्थिन्।
त्यसैले पनि उनले विवाह बाहिर नल्याएको बताइन्छ। केकीले कोसँग विवाह र कहाँ विवाह गर्दैछिन् अहिले बाहिर आएको छैन। उनको प्रोडक्सन हाउससँग जोडिएको एक सदस्यले विवाह हो भन्ने सुनेको तर व्यक्ति अझै थाहा नभएको बताए।
केकीको विवाहको हल्ला अगाडी आजै तीन अभिनेत्री रेखा थापा, पूजा शर्मा र वर्षा शिवाकोटीको विवाहको हल्ला पनि चलेको थियो। केही अगाडि कोट म्यारिज गरेकी रेखाको त्यस अगाडि वैशाखमा विवाह हुने चर्चा थियो।
पूजाले भने केही अगाडि एक कार्यक्रममा छिट्टै विवाह गर्ने बताएकी थिइन्। यता वर्षाको पनि विवाह हुन लागेको हल्ला केही दिनदेखि चलिरहेको छ। नेपाली फिल्म क्षेत्रमा अविवाहित अभिनेत्री थुप्रै छन्।
धेरै अभिनेत्रीहरू विवाहको प्रश्नमा छिट्टै भनेर समेत बताउँदै आएका छन्। त्यस्तै, जुत्ता लुकाएर साढे ११ करोड मागेका सालीहरूलाई रणवीरले १ लाख मात्र दिएका छन्।
आलिया-रणबीरको विवाहमा रणवीरले सासुबाट निकै महँगो उपहार पाएका छन् । रिपोर्टका अनुसार आलियाकी आमा सोनी राजदानले रणवीरलाई २.५ करोडको घडी उपहार दिएकी छिन्।
यो घडी एकदमै विशेष रहेको बताइन्छ । यो ठूलो ब्रान्डको सीमित संस्करणको घडी हो। बिहेको क्रममा आलियाका बहिनीहरू पूजा-शाहीन भट्ट र आलियाको गर्ल ग्याङले बेहुलासँग जुत्ता चोरीवापत ११.५ करोड रुपैयाँ मागेका थिए। तर, रणवीरले उनलाई एक लाख मात्र दिए।
अप्रिल १४ मा रणवीर र आलियाले विवाह गरेका थिए । विवाह समारोह अत्यन्तै व्यक्तिगत थियो र विवाहमा परिवारका सदस्यहरू मात्र सहभागी थिए। हिन्दुस्तान टाइम्सको रिपोर्टका अनुसार आलिया र रणबीरले फेरे पछि औंठी साटासाट गरे।
आलियाले उपहारको रूपमा हिराको औंठी पाइन्। फेरेपछि आफन्तले दुलहा र दुलहीलाई उपहार पनि दिए। सोनी राजदानले रणवीरलाई घडी गिफ्ट गरिन् । विवाहका पाहुनाहरूलाई फिर्ता हुँदा उपहारस्वरूप कश्मीरी सल दिइयो।
यो शल धेरै महँगो छ र धेरै राम्रो सामग्रीबाट बनेको छ। यो शल आलियाले पाहुनाको लागि रोजेकी थिइन्। पाहुनाहरुले पनि बेहुलीको छनोट मन पराए । आलियाले हल्दी सेरेमनी गरिन् तर हल्दी लगाएपछि चुडा सेरेमनी गरिनन्।
यो संस्कारमा बेहुलीलाई रातो रङ्गका चुरा लगाइन्छ। बेहुलीले विवाहपछि ४० दिनसम्म यी चुरा लगाउनुपर्छ। आलियाले बिहेको केही दिनपछि मात्रै आफ्नो फिल्मको सुटिङमा भाग लिनुपर्ने भएकाले ४० दिनसम्म लगातार चुरा लगाउन नसक्ने भएकाले यो संस्कार गरिएन।